Ardaydii Jaamacadda Gedo oo u fariistay imtixaanaadkii semester-kii labaad iyo Jaamacadda oo qaadanaysa arday cusub.
Waxaa maalintii khamiista ahayd ee 18-12-2008 soo xirmay imtixaankii semester-kii labaad ee ardayda dhigata kuliyadda maamulka iyo maaraynta (Business Administration) ee Jaamacadda Gedo. Waxaana Jaamacaddu qaadanaysaa arday cusub oo ah kuliyaddaas kor ku xusan iyadoo shuruudaha aqbalaaduna laga heli doono xarunta Jaamacadda ee Bardheere.
Jaamacadda Gedo waxay ku hawlantay buuxinta kaalinkii jaamacadeed ee uu u baahnaa gobolka Gedo wallow ay jaamacaddu ku jirto marxalad bilow ah, waxayna intay jirtay fulisay hawlo la xiriira tacliinta sare, seminaaarro iyo baraarujinta bulshada si ay iskaga kaashadaan danta guud iyo horumarinta gobolkooda.
Guddoomiyaha Jaamacadda Gedo Prof.Bashiir Cumar Ciise ayaa sheegay in Jaamacadda Gedo oo ah jaamacad ay leeyihiin bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolada Gedo, Bay iyo Bakool iyo Jubbooyinka ay bogaadin iyo mahad naq u dirayaan Jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool wadamada dibadda gaar ahaan waqooyiga ameerika oo ururka SDF ay jaamacadda ka taagereen qalabaynta iyo mushaaraadka macallimiinta, 5-tii bilood ee lasoo dhafayna ay ugu deeqeen Jaamacadda Gedo lacag gaaraysa $12,535 oo isugu jirtay qalab xafiiseed, mid waxbarsho iyo kuraasidii Jaamacadda iyo lacag caddaan ah oo mushaaraadka macallimiinta lagu kabayey.
Waxaa kaloo guddoomiyuhu mahad naq u diray C/laahi Cabdi Canshuur(C/laahi AB4) oo ka mid ah hawl wadeenada ururka samafalka wadaniga ah ee SADO ee ka hawl gala magaalada Baardheere kaasoo ugu deeqay Jaamacadda Gedo Computer Laptop ah oo qiimihiisu yahay 121,000 Kenya Money iyo buugaag uu ugu deeqay Library-ga jaamacadda iyadoo horeyna ay SADO jaamacadda ugu deeqday buugaag qiimo weyn ugu fadhiyey Jaamacadda.
Jaamacadda Gedo waxaa la aasaasay bishii Maarso ee 2008-da waxayna tiigsanaysaa sidii ay bulshada reer Gedo uga haqab tiri lahayd waxbarasho heersare oo ay uga kaaftoomaan aadista xeryaha qaxootiga ee wadamada deriska ah iyo u haajiridda meelo ka fog gobolkii ay u dhasheen iyagoo raadinaya waxbarasho heer Jaamacadeed ah. Jaamacaddu waxay waajahaysaa arrimahaas la xiriira horumarinta bulshada iyadoon cidna u xaglinayn kana madax bannaan ururada siyaasadda, kuwa diinta iyo kuwa qabyaaladda ku dhisan waxayna jaamacaddu ku sifowday dhexdhexaadnimo taasoo ay ka markhaati kici karaan bulshada reer Baardheere ee la socday hawlaha jaamacadda mudadii ay jirtay.
Ugu dabayntii wuxuu guddoomiyuhu ugu baaqay bulshada reer Gedo iyo Gobolda ku xeeranba inay ka faa’iidaystaan fursadda ugu soo gashay gurigooda ayna tiigsadaan gobolda kale ee dalka ee isku tashaday, wuxuu kaloo guddoomiyuhu ugu baaqay in Jaaliyadda Soomaaliyeed reer Yurubna kaalinkooda soo buuxiyaan ooy Jaamacadda taageeraan.